अब भारतीय नागरीकले श्रम स्वीकृती बिना नेपालमा काम गर्न नपाउने , कडाईका साथ कार्यान्वयन हुने – Nepal Trending
अब भारतीय नागरीकले श्रम स्वीकृती बिना नेपालमा काम गर्न नपाउने , कडाईका साथ कार्यान्वयन हुने
On १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २०:४०
काठमाडौं : श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने भएको छ। अब बाट नेपालमा काम गर्ने हरेक बिदेशी नागरीकले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्न पाउने छन । यसको मतलब अब बाट भारत लगायतका बिदेशी कामदारहरुले अनीवार्य रुपमा श्रम स्विकृति लिनुपर्ने छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमार्फत् यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए। साथै, उनले श्रम निरीक्षण गरिने बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई रूची र सीपअनुसार देशमा काममा जोडिने उनले बताए। संघ र प्रदेश स्तरबाट बेरोजगारलाई सीप विकास र तालिम प्रदान गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको उनले बताए।
सरकारले वृद्ध, अपांग, एकल महिला लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्। यसअघि विभिन्न सञ्चार माध्यममा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको भन्ने हल्ला चलेको थियो।
बिदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन बजेट
सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसरी ल्याइएकाहरूलाई सीप प्रदान गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्कन चाहेकाहरुलाई ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए ।कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशका धेरै अलपत्र छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यो कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ । आगामी वर्ष साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै ७५ हजार सीपमूलक तालिम दिनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब छुट्याइएको खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।